Labo nin oo soomaali ah oo lagala soo degay diyaarad ay la socdeen – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Labo nin oo soomaali ah oo lagala soo degay diyaarad ay la socdeen
Wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa sheegaya in labo nin oo Soomaali ah maalintii shalay lagu xiray garoonka diyaaradaha Jommo Kenyatta (JKIA), kadib markii lagu eedeeyay inay sigaar ku dhex cabeen diyaaradihii ay la socdeen.
Labadaasi nin oo lagu kala magacaabo Caraboow Muuse Xasan iyo Maxamed Jaamac Maxamed ayaa la sheegayaa inay kasoo dhoofeen dalka Koonfur Afrika, waxayna Transit kusii ahaayeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi, iyagoona kusii jeeday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Diyaaradaha oo tirsigoodu yahay KQ 763 iyo KQ 783 ayaa markii ay kasoo degeen garoonka JKIA ee magaalada Nairobi, waxaa lagala soo degay islamarkaana xabsiga la dhigay labadaasi nin oo lagu soo eedeeyay inay sigaar ku dhex cabeen diyaaradahaas.
Labadaasi nin ee Soomaaliga ah ayaa lagu wadaa in maxkamad lagu soo taago magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, iyadoona illaa iyo haatan aan la ogeyn waxa uu xukunkooda noqon doonno.
Diyaaradaha duulimaayadda sameeynaya ayaa inta badan waxaa mamnuuc ka ah in lagu dhex cabo sigaarka, waxaana laga yaabaa in labadaasi nin ganaax lacageed lagu xukumo.